New Zealand Waxay Bilaabeysaa Tijaabooyinka LSD Microdose ee Bukaannada Marxaladda dambe • Dawooyinka Inc.eu
New Zealand waxay u bilaabataa tijaabooyinka 'microSD' microdose tijaabada bukaanka kansarka marxaladda dambe
Seynisyahanno ku sugan Auckland ayaa qorsheynaya inay siiyaan bukaanka kansarka marxaladda horumarsan ee microdoses ee daawada dhimirka ee LSD Hogaamiyaha cilmibaadhe, cilmi nafsiga caafimaadka Lisa Reynolds oo ka tirsan jaamacada Auckland, ayaa sheegtay in dawadani ay bukaan socodka siin karto waddo garasho si loo yareeyo walwalka ku saabsan dhimashada loona ogolaado inay la xiriiraan waxa muhiimka u ah iyaga.
Qaar ka mid ah warbixinnada anecdotal iyo daraasadihii hore ee ka soo muuqday LSD microdosing waxay soo jeedineysaa in LSD ay dadka ka dhigi karto mid xagga garashada la jaanqaadi kara, taasoo dadka ka dhigeysa inay u furan yihiin fikradaha cusub. Waxay awood u siin kartaa dadka inay wax ka arkaan aragtiyaha cusub. Kuwani waa noocyada maskaxda iyo siyaabaha looga fikiro waxyaabaha leh awood u leh inay daaweyntu u shaqeyso si ka fiican oo waxtar badan.
Cilmi-nafsiyeed: dib-u-cusbooneysiinta cilmiga ah ee daroogada maskaxda beddelaysa
Sannadihii XNUMX-meeyadii, cilmi-nafsiga ayaa laga tanaasulay, laakiin hadda daroogada maskaxda beddelaysa waxay la kulmayaan soo nooleyn cilmiyeed. "Cilmi-baarayaashu ma oga in dadka qaarkood ay ku dhacaan walaac qoto dheer ama niyad-jab ka yimaada qaadashada LSD, laakiin cilmi-baaristu waxay iftiimin kartaa su'aalaha noocaas ah," ayuu yiri Reynolds.
"Waxaan ahay saynisyahan waxaanan doonayaa inaan wado tijaabo si fiican loo qaabeeyey, oo adag, waana arki doonaa haddii ay jiraan waxyeellooyin xun." Is-maamulka LSD maadooyin saddexdii maalmoodba mar ayaa sharci noqon kara, laakiin kooxda cilmi-baarista waxay sugayaan oggolaanshaha tijaabada. Tijaabooyinkii hore ee sanadihii XNUMXs, XNUMXs iyo XNUMXs ayaa lagu joojiyay Mareykanka cadaadis siyaasadeed awgood, taasoo ka dhalatay macluumaad badan oo qaldan oo ku saabsan sida ay daroogadu halista u yihiin, ayay tiri.
“Cilmibaarista aan illaa iyo hadda soo arkay waxay muujineysaa in cilmu-nafsiga sida LSD ay awood u leeyihiin inay horumariyaan tayada nolosha, yareeyaan cabsida dhimashada, inay yareeyaan welwelka iyo niyad-jabka, ayna kordhiyaan ruuxnimada. Waxa jira waxyaabo badan oo hore loo helay oo aad u qanciya. ”
Akhri wax dheeraad ah walax.co.nz (Source, EN)
caafimaadkakankermicrodosingNew Zealandcilmi baaris
Bilaabida Teknolojiyada iyadoo la adeegsanayo soosaarka boqoshaada sixirka si loo daweeyo niyad-jabka caafimaad ayaa kor u kacaysa £ 64 milyan
Wadooyinka loo yaqaan 'Compass Pathways' ee bilawga ah ee Ingiriiska ayaa baaraya psilocybin, walaxda nafsaaniga ah ee ku jirta likaha sixirka. Shirkadda waxaa iska leh ...
Hadda Corona wali wuu inala joogayaa lamana oga ilaa goorta tallaabooyinka ...
Isbitaalkii ugu horreeyay ee Scotland ee sharciyeysan ee xashiishadda ayaa sheegay in uu keenayo in ka badan 500 ...